Mpanamboatra taratasy & mpamatsy - China Paper Factory
Taratasy fanaovana asa-tanana vita amin'ny frantsay Fries Box
Malaza eran'izao tontolo izao ny sakafo haingana, ary ankoatry ny sakafo haingana, ny fries frantsay no vokatra be indrindra satria sakafo matsiro sy mahavariana. Mba hihazonana ny matsiro sy hampitomboana ny androm-piainany dia mihalehibe ny filana vahaolana fonosana matanjaka sy manintona. Ny boaty Fry Frito namboarina manokana sy voadinika tsara dia heverina ho vahaolana mety indrindra amin'ny vokatra toy izany satria novolavolaina manokana izy ireo mba hanatsarana ny haavon'ny fiarovana ny vokatra sakafo toy ny fries. Izy ireo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fisarihana ny mpanjifa sy ny fampitomboana ny varotra sy ny fahaizan'ny mpivarotra tsirairay.
Vata Burger Burger Fast Food azo ampiasaina
Ny boaty sy ny fantsom-boanjo misy ny ekipan'i Chunkai dia vokatra marobe momba ny tontolo iainana (Eco). Manolotra pirinty manokana miaraka amin'ny sary famantarana anao amin'ny ankamaroan'ny vokatrao koa izahay. Amin'ny fisafidianana ny vokatra biodegradable anao dia manao dingana lehibe mankany amin'ny serivisy sakafo maharitra ianao na inona na inona cafe, fivarotana enta-mavesatra, orinasa fandraharahana, trano fisakafoanana, birao na orinasa lehibe. Ahenao kely ny dian-tongotrao karbaona amin'ny fisafidianana ny vokatray.
Bowl vita amin'ny asa-tanana vita amin'ny asa-tanana
Ny Disposable Craft Paper Soup Bowl dia kaopy azo ampiasaina vita amin'ny taratasy ary matetika nilaharana na nopetahany plastika na savoka mba hisorohana ny rano tsy hivoaka na handona ny taratasy. Mety vita amin'ny taratasy namboarina io ary be mpampiasa erak'izao tontolo izao. Afaka manome habe samihafa izahay avy amin'ny kaopy 4oz ka hatramin'ny 30oz. Azontsika atao koa ny manamboatra ny loko pirinty na ny gram ara-materialy. Inona koa, afaka manamboatra ny pirinty ho anao koa izahay.
Kopy lasopy fanaovana asa-tanana azo ampiasaina
Ny kapoaka vita amin'ny asa-tanana vita amin'ny asa-tanana dia kapoaka azo alaina vita amin'ny taratasy ary matetika nilaharana na nopetahany plastika na savoka mba hisorohana ny rano tsy hivoaka na handona ny taratasy. Mety vita amin'ny taratasy namboarina io ary be mpampiasa erak'izao tontolo izao. Afaka manome habe samihafa izahay avy amin'ny kaopy 4oz ka hatramin'ny 30oz. Azontsika atao koa ny manamboatra ny loko pirinty na ny gram ara-materialy. Inona koa, afaka manamboatra ny pirinty ho anao koa izahay.
Ity Brown Kraft Paper Box Factory ity dia manana fitaovana voafantina tsara kalitao, malefaka sy malefaka, malefaka ary malama, tsara asa, naoty maro kokoa, ny firafitra. Asa tanana mahafinaritra, fitsaboana zorony lavorary, tsara tarehy sy mateza. Ny firafitra mahafinaritra dia mahatonga ny boaty fanomezana ho milamina kokoa.
Mpanamboatra boaty pizza vita pirinty
Ny fisehoan'ny 8 "Printed Pizza Box dia tsara, mazava ny lokony, manintona ny lamina ary tsy mora manjavona izy. Toerana milamina sy malefaka, safidy tsara amin'ny taratasy miolakolaka, fitaovana azo tsofina ary ny famolavolana lavaka fanamafisana dia miantoka fa tsy mihasimba ny pizza. Ny boaty dia matevina sy mafy orina, akora ara-tsakafo misy taratasy fanamarinana FSC, mahasalama sy sariaka amin'ny tontolo iainana, izay afaka mifanaraka amin'ny fenitra FDA, azo antoka ary tsy misy loto. Ny firafitry ny lipotra dia manamora ny fanokafana sy ny fanidiana mandritra ny fampiasana azy.
Mpanamboatra boaty voankazo vita amin'ny taratasy
Ity boaty voankazo vita amin'ny taratasy ity dia misy taratasy matevina telo matevina, mahery sy mateza. Natao ny vavahady mba tsy hahatonga ny vokatra ho mora lo. Fanontam-pirinty modely mahafinaritra, mifanaraka amin'ny sarin'ny manga, tsara tarehy sy malala-tanana, manatsara ny sandan'ny vokatra. Ny tantana dia mitombina amin'ny famolavolana, tsy mora vaky, ary tsy mandratra tanana. Ny boaty dia matevina sy mafy orina, akora ara-tsakafo misy taratasy fanamarinana FSC, mahasalama sy sariaka amin'ny tontolo iainana, izay afaka manaraka ny fenitry ny FDA, azo antoka ary mandoto. -free. Ny firafitry ny lipotra dia manamora ny fanokafana sy ny fanidiana mandritra ny fampiasana azy.